အဘယ်အရာကို pissing သလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဆီးဖွင်ရသူတွေကို, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့ဆီး isporozhnyayut သူကမိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ကအခြားသူတစ်ဦးအပေါ်လုပ်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရေးရန်နှင့်ပေါ်မှာ pissing အပျော်တမ်းမကြုံစဖူးအပျြောအပါးကိုရရှိပါလိမ့်မယ်နိုငျသညျ။
အချို့လူများကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အမှုအရာကိုခံစားစေနိုင်သည်။ ဥပမာစုံတွဲတစ်တွဲပုံမှန်လိင်အပြင်အလွန်အချင်းချင်းရေးသားဖို့ကိုကြိုက်ကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဒီဂိမ်းကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် pissing သို့မဟုတ် quote; ကိုရွှေ dozhdquot; ။ ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုလူတကရေးသားတဦးတည်းမျိုးကနေမောင်းနှင်နေကြသည်။ ထိုအခါအချို့မယ့်ဟာခန္ဓာကိုယ်အပေါ်, သူတို့၏လိင်ပိုင်းသို့မဟုတ် partnra partnrshi ၏နှုတ်တော်ထွက်သို့ရေးသားဖို့ကြိုက်တယ်။
Pissinogom ဖြစ်စဉ်ကိုဆီးသွားခြင်းတယောက်ကိုတယောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ကိုခေါ်။ ဒီကနေပျော်မွေ့သောသူအချို့လူတွေရှိပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲကရိုးရိုးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဖုန်းဆက်ဖို့ udovlstviya ခက်ခဲရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတိုင်းမိမိထူးဆန်းတဲ့ရှိပါတယ်လို့ပြောအဖြစ်။
Pissing - အမည် မှနေ၍ သင်မှန်းပြီးသကဲ့သို့လိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကအခြားတစ်ယောက်ထံစာရေးသည့်အချိန်တွင်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ကောက်သော, သင်တန်း, ဒါပေမယ့်တချို့လူတွေဤလုပ်ငန်းစဉ်ကနေအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, များသောအားဖြင့်ပျော်မွေ့နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်အနည်းငယ်အတွင်း defecates နှင့်အရာအပေါ်တဦးတည်းအကြေးစွန်တဲ့သူတဦးတည်းရ။
partnra ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် partnr မှဆီး၏လုပ်ရပ်ကသူ့ကိုမှာဆီးသွားခြင်း၏လုပ်ရပ်လုပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအလိုဆန္ဒအနေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလာပြီ။ Fuuuuuuuu, နေမကောင်းဖြစ်မယ့် ... ..
ကိုးကား။ pissing သို့မဟုတ် "ရွှေမိုး"၊ - မိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ဆီးခုံပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်သော်လည်းကောင်းသူတို့အိမ်သာတွင်ထိုင်နေသောအခါ၌၎င်း၊ မိတ်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မွှေးကြိုင် / pisses လုပ်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, က ဦး နှောက်၌တည်ရှိ၏။ ထိုသို့သောရုပ်ပုံများသည်ဗီဒီယိုနှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပြည့်နေပြီးလူကြိုက်များသည်။ များသောအားဖြင့်ချိန်းတွေ့သည့်နေရာများတွင်သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ထားရှိသူများကိုရှာဖွေကြသည်။
ပြည်သူ့အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကအချို့ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်သူ့ကိုအပေါ် pissing ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေအပျော်အပါးရ။ ဒါကရွှေသို့မဟုတ် pissing မိုးရွာရွာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ငါသောစံတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ကြပါဘူး။ အများစုမှာဖွယ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသှဖေဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကာလ၌မိမိတို့၏ဆီး (ဆီး) ၏လူဦးအဖြစ်ကုသနဲ့အတော်လေးသာမန်လူတွေဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။
pissing, ရွှေမိုးသို့မဟုတ် ပို၍ သိပ္ပံနည်းကျ Urolagnia အမည် - ဤသဘောတရားအားလုံးသည်ဆီးသွားခြင်းမှလိင်အပျော်အပါးကိုရရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ဒါမှမဟုတ် quote အပေါ်မိတ်ဖက်; youquot; ဆီးသွားသည်။ သို့မဟုတ်အခါ quote; youquot; သင့်လိင်ကြင်ဖော်ဘက်မှဆီးသွားပါ။
ပရိသတ်တွေ၏အချို့ Quote ကျသွားရွှေမိုးရွာရွာမကြိုက်ဘူး; dozhdyaquot; သင်၏နှုတ်၌၎င်း, သာသည့်အခါ Quote အပျော်အပါးကို ယူ. သွားကြလော့ရွှေ dozhdquot; သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရေ။
ဒီ technique ကို၏မူကွဲများတွင်ပြိုင်ဘက်များနှင့်ထောက်ခံသူနှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးရှိသည်။ ၏သင်တန်းပိုပြိုင်ဘက်။ ထို့ကြောင့်, အပျြောအပါးဒီလိုမျိုး၏ပရိသတ်များ, များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းဖုံးကွယ်။
အဆိုပါစကားလုံး quote; pissingquot; Quote ဆိုလိုတာကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို pissing ၏ရုရှားဘာသာစကားသို့ pumped လျက်ရှိ၏ pisatquot; ။ တစ်ဦးကအယူအဆ Quote ဖြစ်၏ pissingquot; အောက်ပါ။ ကလူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆီးသွားခြင်းအပေါ်ဖြစ်စေ, အရှင်ကိုခံစားတဲ့အခါမှာဒါဟာလိင်စဉ်အတွင်းပျော်စရာစုံတွဲများ၏ထိုကဲ့သို့သောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ရေးသားဖို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာ, အင်္ဂလိပ်စကားလုံး pissing ထံမှ Pissing ။
ရွှေမိုးရွာခြင်းသည်လိင်အပျော်အပါးများ၌ပါ ၀ င်သည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြို့သောဤစိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်စား fikalii တည်းဟူသော copra ၏အမည်ကိုဆောင်သောအခြားသိမ်းပိုက်ဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကယ့်မျိုးစေ့များဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းအော့နှလုံးနာသောသူတို့အဘို့မပါလျှင်တစ်ဦးမသိစိတ်တစ်ပိုင်းအဆင့်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကလက်မခံသော scat နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရွှေမိုးရွာရွာ, ထိုဆန့်ကျင်ဖို့ဘာမှကိုယ်စားပြုမထားဘူး။
သူ၏နှုတ်၌ pisses သူမည်သူမဆိုသူစေသည် blowjobနှင့်ရေးသားဖို့ဘယ်သူကိုမှတကသူမ ခန့်ရွှေမိုးရွာရွာ.
pissing ဟာအင်္ဂလိပ်လို pissing ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အရေးအသားအဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ I. pissing ကိုမိတ်ဖက်များဆီးသွားသည့်အခါဆီးအိမ်ပြုသည့်အခါလိင်စိတ်အားနည်းသောကစားနည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရွှေမိုးအဖြစ်လည်းခေါ်သည်။
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,263 စက္ကန့်ကျော် Generate ။